'ရင်ခွင်ရှင်းတမ်း' ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲကို Channel9နှင့် VIU Application တို့တွင် ထုတ်လွှင့်ပြသတော့မည် - Yangon Media Group
‘ရင်ခွင်ရှင်းတမ်း’ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲကို Channel9နှင့် VIU Application တို့တွင် ထုတ်လွှင့်ပြသတော့မည်
‘ရင်ခွင်ရှင်းတမ်း’ ရုပ်သံဇာတ် လမ်းတွဲကို မေလဆန်းပိုင်းမှ စတင်ကာ Channel9ရုပ်သံလိုင်းနှင့် VIU Application တို့တွင် ထုတ်လွှင့်ပြသတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲကို Channel9နှင့် Myanmar Media7တို့မှ ပူးပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်ကာ ဇန်နဝါရီလ မှစတင်ပြီး ရိုက်ကူးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”ရင်ခွင်ရှင်းတမ်း ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲကို မကြာခင် ပရိသတ်တွေ ကြည့်ရှုခွင့်ရတော့မှာပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းက အချစ်ဇာတ်လမ်းလို့ပြောရင်လည်းရပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာဆိုရင် ပရိသတ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ အနုပညာရှင်တွေ အပြင် မျက်နှာသစ်သရုပ်ဆောင်တွေလည်းပါတာကြောင့် ပရိသတ်တွေ ကြည့်ပြီးတော့ ဝေဖန်ပေးကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်”ဟု ဒါရိုက်တာ သားညီက ပြောသည်။
‘ရင်ခွင်ရှင်းတမ်း’ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲကို ဒါရိုက်တာ သားညီမှ ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး သရုပ်ဆောင် ဟိန်းဝေယံ၊ အုပ်သာကျော်၊ငြိမ်းသော်၊ အေးဝတ်ရည်သောင်း၊ သွန်းဆက်၊ ဟန် လေး၊ သီရိစိုး၊ ခေးလရောင် အစရှိသော အနုပညာရှင်များစွာတို့အဓိကပါဝင်ကြမည်ဖြစ်သည်။
‘ရင်ခွင်ရှင်းတမ်း’ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲသည် လူငယ်တို့သဘော သဘာဝဖြစ်ပျက်တတ်သော အချစ်ရေးပြဿနာများကို အခြေခံကာ ရိုက်ကူးထားသောဇာတ်ကား ဖြစ်ကာ အပိုင်း ၁၈ ပိုင်းပါဝင်ကာ ရန်ကုန်၊ ငွေဆောင် အစရှိသော နေရာများတွင် သွားရောက်ရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်သည်။
မေလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်၍ မြန်မာ့မွေးမြူရေးငါးများ ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသို့ တင်ပို့ခွ??
ဇွန်လလောက်မှာ 'လူအဂီတ MusicVedio Tour 'ဆိုပြီးတော့ မြို့ခုနစ်မြို့ လောက်ကို သွားရောက်ဖျော်ဖြေဖို့ ရှ??
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာ့သားကောင်း စစ်မှုထမ??
ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန် ပြည်သူတွင်လည်း တာဝန်ရှိကြောင်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်နှိုးဆော်